Diyaar cagaar ah ee uu daad ah, Wavewn ka heleysaa fabriyadeedka caafimaadka ee u soo baxay - China Boeggeer
Waxaad halkan tihiin:Guri > Products > Architectural Mesh > Goobta codsiga ah>Rope Mesh
Dibaad la'aanta ee la'aanta ee la'aaneyWaa u dhashay dhismooyinka goobta hore, waxayna u noqday si cusub ee daahirinta. Sidaas daraad waa maxay u yahay xidhiidhka cagaar ah ee gaar ah? Deyga cagaar ah ee uu uu uu uu ku sameeyaa uu uu uu u soo guuray uu uu uu uu uu uu u soo guuray ee daboolka ee dabka ah. guryaha waaweyn. Deyga cagaar ah ee xirfadeed ee xirfadda dhismaha iyo dhismooyinka. Qarsaasha waxaa caawimaad u heli karaan xirfadeed kala duduwan ee dhismooyinka dhismooyinka.
Qarso gaar ah deraha cagaah
Deyga cagaar ah ee xidhibka daboolka ah ee uu uu uu uu uheyn kartaa hoosayso badan.
I Qaar ah- Halka ka sameysaa 316 saleys la'aanta, dhaqaaladaha cagaabaha ah waa xoog badan oo qurban badan, laakiin miisaan. Waxay yihiin 100% dib u u baahan karaan, kuwaas oo aad u taqabsan yihiin guryaha, wax yar ama kuma baahan. Wax ka badan waxaa u muujiyaa nolosha si aad u dheer ah ka muuqanaa goobta suuqa.
I Dhikha- Xarunta adag ah waxaa ku yaal awooyinka sare iyo dabayl adag iyo baraf. Waxay u qabtaanaa xirfadeeda 3-taad, si aad u bixisaa waxyaabaha la yahay. Intaas waxaa sidoo kale waxaa ku yaal waxqabad muhiim, haddii xitaa cimuulka kulayso, haddii mayda kulayso.
I Kaalmooyinka deegaanka ee gaar ah ah- Waxaa loogu talagalay in uu kaalmooyinka canabka badan oo badan, kuwaas oo ka soo bixiyaa oxiyada, si uu uu ka dhinacdo shuruudaha.
I Maamulka xirfadeedka iyo xirfada- Waxay u diyaarinayaa cuuurta dhismahaaga, dhinaca gurigaada gurigaada uu ku baaraandegeeda, iyo sidoo kale uu si uu u baaddo ee saawadeed.
I Kaalmooyinka sooshalka iyo dhimirka- Dadka uu daboolka cagaar ah ee gaar ah ee gaar ah ee gaar ah ee u dhacayso uu dhacayso.
I Codsiyada sare- Dadka ah ee daboolka ah ee gaarka ah ee gaarka ah ee u ah waxaa lagu codsan karaa xarunta ama bogga ah, tusaale ahaan beerta, jidiyaum iyo garaj.
I Waxaa sah ah la xiriirta- Lacagta u baahan waxey u baahan yihiin uu u baahan yar ugu yaraan qalabka, markii la xiriira.
I Sah- Nidaamka caawimaad ah ayaa ka ogolaysaa dhaqaalaha iyo geeysta. Intaas waxaa dheer oo uu dhaqaalaha cagaar ah waxaa looga saabsan karaa guriga guriga ee isticmaalka guriga ah.
I Qaarka sare:Fiican sare ee da'aanta 304, 316, 304 L iyo 316L.
I Diyaameateeda:Sidoo kale waxaa ka heleysaa 1.2 mm saacadaha saacadda 3.2 mm.
I Diso sare:7 × 7 iyo 7 × 19 waxaa looga isticmaalaa, laakiin waxaa lagu bixiyaa 1 × 7 iyo 1 × 19.
I Lacagta furanka: 25 mm × 25 mm ama 76 mm × 76 mm ucm, oo waxyaabaha kale waxaa ku saleysaa u baahantaha macaamiilka.
I Nidaad:Cidhibka la'aanta ee la'aanta uu uheeyo ama uu uu uheyn ee dabka ah.
Daryadeeda qiimadka deraha cagaah
Ka dambe :Lacagta darafka shubka
Rope Mesh Murbi gaar ah wuxuu u badbaadaa derbixinta dhiska
Rope Mesh Murbi gaar ah wuxuu u badbaadaa derbixinta dhiskaDibaad la'aanta ee la'aanta ee la'aaneyWaa u dhashay dhismooyinka goobta hore, waxayna u noqday si cusub ee daahirinta. Sidaas daraad waa max...
Qayb ka mid ah aqoonka cagaarka?
QeybAabaha cagabooca?AvokadoInta badan Avokado waxaa looga isticmaalaa salad ah, taasoo caadiga ah ajaaniibta. Sidaas oo kale waa midhahaha midhaha oo saaxiibka badan u dhaqaalay. Avokado waxaa ku yaa...
Dadka gaadhsii | Rugaha la kordhaada
Dhaqaaladaha gaadkaWaxay ka soo baxsan karaan xaaladaha dhismooyin kala duduwan ah, oo ay uu koriyaan guryaha sare kala duduwan, si aad ugu fudud ah, kuwaasoo uu uu u soo baxaa dhulka, si u ogolaansha...